माधव नेपालले बोलाए आफूपक्षीय बैठकः के छन् छलफलका विषय ? |
Home राजनीति माधव नेपालले बोलाए आफूपक्षीय बैठकः के छन् छलफलका विषय ?
माधव नेपालले बोलाए आफूपक्षीय बैठकः के छन् छलफलका विषय ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेको असन्तुष्ट माधव कुमार नेपालसमूहले आफूपक्षीय नेताहरुको बैठक बोलाएको छ ।
नेता रघुजि पन्तका अनुसार नेपाल पक्षको बैठक नयाँ बानेश्वरको बुद्धनगरमा सोमबार दिउँसो बैठक बस्ने तयारी छ ।नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटीको बैठक आइतबार साँझ पनि बसेको थियो । आजको बैठक त्यसैको निरन्तरता भएको पन्तको भनाइ छ ।
उनका अनुसार पार्टी एकता काम राख्ने सन्दर्भमा छलफल केन्द्रित छ । हिजोको बैठकमा बैठकमा कार्यदलले सहमति गरेको १० बुँदे प्रस्तावमा पनि छलफल भएको थियो ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच टकराव बढ्दो छ । एमाले प्रतिपक्षमा पुग्दा पनि सत्तारुढ गठबन्धनसँगको सहकार्य जारी रहेका छन् । नेपालमाथि पार्टी एकतासँग सरकारमा जाने पनि समूहभित्रैबाट दबाब छ । पार्टी एकतामा लाग्ने वा नयाँ पार्टी बनाएर सरकारमा जाने भन्नेमा नेपाल पक्षभित्र मतान्तर छ ।
एमाले विवाद समाधान गर्नको निम्ती गठन भएको कार्यदलले दिएको १० बुँदे सहमतिअनुसार पार्टी एकजुट नभएरपछि तेस्रो पुस्ताका नेताहरु पनि सक्रिय भएका छन् । तर एमाले न फुट न जुटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।
हिजो मात्रै नेता नेपालले अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा संस्थापन पक्षका सांसद नारदमुनी रानालाई झपारेका थिए ।
विशेष अदालतद्वारा चूडामणि शर्मासँग ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग
नेपाली कांग्रेसको मुसिकोट नगर सभापतिमा सचिव मोहन घिमिरेद्वारा उम्मेद्वारी घोषणा
देउवालाई किन घुर्की देखाउँदैछन् उपेन्द्र यादव ?